မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဖြစ်အများဆုံး ရောဂါ (၆) မျိုး ကနေ ကလေး - Hello Sayarwon
ဘေဘီလေးကို ပျော်ရွှင်ကျန်းမာစွာနဲ့ ကြီးပြင်းလာစေချင်တဲ့ ဆန္ဒက မိဘတိုင်းမှာရှိသလို ဘေဘီလေးကို အန္တရာယ်ပြုဖို့ စောင့်နေတဲ့ ရောဂါဆိုးတွေကလည်း ဒုနဲ့ဒေးပါ။
ဒီရောဂါဆိုးတွေထဲမှာ ကိုယ်အင်္ဂါ မသန်စွမ်းမှုကို ​ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ရောဂါတွေ ပါသလို အသက်ကို ရန်ရှာနိုင်တဲ့ ရောဂါမျိုးတွေလည်း ပါပါတယ်။ ဒီရောဂါဆိုးတွေကနေ ကာကွယ်ပေးဖို့ကလည်း မိဘတွေရဲ့ တာဝန်တစ်ရပ်ပါ။
ဒီတာဝန်ကို ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်နိုင်စေဖို့အတွက် ဘေဘီလေးတွေကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ ရောဂါဆိုးတွေက ဘာတွေလဲ။ ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတာကို ဆောင်းပါးလေးထဲမှာ ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
ဘေဘီလေးကို ထိခိုက်စေနိုင်မယ့် ရောဂါဆိုးတွေက ဘာတွေလဲ။
ဘေဘီလေးတွေရဲ့ ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ ကြီးပြင်းလာမှုကို အနှောင့်အယှက်ပေးနိုင်တဲ့ ရောဂါဆိုးတွေကတော့
ဆုံဆို့နာဆိုတာက Corynebacterium diphtheriae ဘက်တီးရီးယားကြောင့် လည်ချောင်းနဲ့ အဆုတ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ ကူးစက်ရောဂါ တစ်မျိုးပါ။
ဒီဘက်တီးရီးယားက အဆိပ်တစ်မျိုးကို ထုတ်လုပ်ပြီး နှလုံးနဲ့ အာရုံကြောက တစ်ရှူးတွေကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
လေပြွန်အဝအဆုံမှာ အမြှေးပါးတွေနဲ့ ပိတ်စေတဲ့အတွက် အသက်ရှူမရဘဲ အသက်ဆုံးရှုံးတတ်ပါတယ်။
နှစ်စဉ် မေးခိုင်ပိုး ကူးစက်မှုကြောင့် လူပေါင်းများစွာ အသက်ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်။ ဒီလို အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေထဲမှာ လူကြီးတွေပါနေသလို ကလေးငယ်လေးတွေလည်း အများကြီးပါ။
မေးခိုင်ရောဂါဆိုတာ Clostridium tetani ဘက်တီးရီးယားကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ပြင်းထန်တဲ့ ဖျားနာမှုကို ဖြစ်စေပြီး ကြွက်သားတွေနဲ့ အာရုံကြောစနစ်ကို ထိခိုက်စေပါတယ်။
အပြင်းထန်ဆုံးအနေနဲ့ အသက်ရှူကြွက်သား အလုပ်မလုပ်တာကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးစေနိုင်ပါတယ်။
၃. ကြက်ညှာချောင်းဆိုး (pertussis)
ကြက်ညှာချောင်းဆိုးရောဂါဆိုတာ Bordetella pertussis ဘက်တီးရီးယားကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ကူးစက်မြန်ရောဂါ တစ်မျိုးပါ။
ချောင်းဆိုးတာကနေတဆင့် လူတစ်ဦးကနေ တစ်ဦးကို ကူးစက်ပါတယ်။ နာတာရှည်ချောင်းဆိုးတာကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆက်တွဲ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေ အနေနဲ့ ပန်းနာရင်ကျပ်၊ ဦးနှောက်ပျက်စီးတာကို ဖြစ်စေနိုင်သလို သေဆုံးသည်အထိ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ပိုလီယိုရောဂါက ပိုလီယိုဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ရောဂါတစ်မျိုးပါ။
အူလမ်းကြောင်းထဲကို ဝင်ရောက်ကူးစက်ပြီး အူလမ်းကြောင်းကနေတဆင့် အာရုံကြောစနစ်ကို ရောက်ရှိလို့ အာရုံကြောတွေကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။
ကြွက်သားတွေကို ထိခိုက်စေပြီး လက်မောင်း၊ ခြေထောက်စတဲ့ကြွက်သားတွေကို အကြောသေစေပါတယ်။ တစ်ခါတလေမှာ အသက်ရှူရခက်စေပြီး သေဆုံးသည်အထိ ပြင်းထန်ပါတယ်။
၅. Haemophilus influenza
ဒီရောဂါက Haemophilus influenza typeb(Hib) ဘက်တီးရီးယားကြောင့် ဖြစ်ရတာပါ။
အဆုတ်ရောင်ရောဂါကို ဖြစ်စေပြီး နောက်ဆက်တွဲ အနေနဲ့ ပြင်းထန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
၆. အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီ
အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီ ဗိုင်းရပ်စ်က အသည်းကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
သွေး ဒါမှမဟုတ် ခန္ဓာကိုယ်အရည်တွေကနေတဆင့် ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ ပြင်းထန်တဲ့ အသည်းပျက်စီးမှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဒီရောဂါတွေမှာ တချို့က ဖြစ်လာရင် ကုသဖို့ ဆေးဝါးမရှိပါဘူး။ အသိနောက်ကျရင် အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ များပါတယ်။
အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ ရောဂါဆိုးတွေ အန္တရာယ်ကနေ ဘေဘီလေးကို အထိရောက်ဆုံး ကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့် အရာတစ်ခုရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ ဘေဘီလေးကို
အသည်းရောင် အသားဝါ ဘီ စတဲ့ရောဂါ (၆) မျိုးအန္တရာယ်ကနေ ကာကွယ်ပေးမယ့် hexavalent လို့ သိကြတဲ့ (၆) မျိုးစပ် ကာကွယ်ဆေးပါ။
၆ မျိုးစပ်ကာကွယ်ဆေးက ဆုံဆို့နာ၊ မေးခိုင်၊ ကြက်ညှာချောင်းဆိုး၊ ပိုလီယို၊ ပြင်းထန် ဦးနှောက်ရောင် ရောဂါ၊ အသည်းရောင် အသားဝါ ဘီ စတဲ့ရောဂါကို ခုခံနိုင်စေဖို့ ဘေဘီလေးရဲ့ ကိုယ်ခံအားကို အကောင်းဆုံး အားဖြည့်ပေးပါတယ်။
၆ မျိုးစပ်ကာကွယ်ဆေးကို ဘေဘီလေးက အသက် ၂ လမှာ ပထမအကြိမ်၊ ၄ လမှာ ဒုတိယအကြိမ်၊ ၆လမှာ တတိယအကြိမ် ထိုးပေးရပါမယ်။ ကလေးအနေနဲ့ ရောဂါတွေကို အထိရောက်ဆုံး ကာကွယ်နိုင်တဲ့အထိ ကိုယ်ခံအား ကောင်းကောင်းရနိုင်စေဖို့ ကာကွယ်ဆေးကို ၃ ကြိမ် ထိုးဖို့ လိုပါမယ်။ ကာကွယ်ဆေး တစ်ကြိမ် ထိုးပြီးတိုင်းမှာ ကလေးရဲ့ ကိုယ်ခံအားက ပိုပိုသန်မာလာမှာပါ။
ထပ်ဆောင်းကာကွယ်ဆေးအနေနဲ့ ကလေးအသက် တစ်နှစ်ခွဲမှာတစ်ကြိမ်၊ ၄နှစ်နဲ့ ၆နှစ်အတွင်းမှာ ၄မျိုးစပ် ဒါမှမဟုတ် ၆မျိုးစပ် တစ်ကြိမ် ထပ်ထိုးပေးရပါမယ်။
ဒါကြောင့် မေမေဖေဖေတို့အနေနဲ့ ဘေဘီလေးကို ကြောက်စရာ ရောဂါဆိုးတွေ အန္တရာယ်ကနေ ကာကွယ်ပေးဖို့ဆိုရင် ငယ်စဉ်ကတည်းက လိုအပ်မယ့် ကာကွယ်ဆေးတွေကို လုံလောက်အောင် ထိုးပေးဖို့ လိုပါမယ်။
6-in-1 vaccine overview https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/6-in-1-infant-vaccine/ Accessed Date 19 January 2021
6 in 1 baby vaccine (Infanrix hexa) https://www.netdoctor.co.uk/medicines/infection/a28591/6-in-1-baby-vaccine-infanrix-hexa/ Accessed Date 19 January 2021
6-in-1 Vaccine https://patient.info/childrens-health/immunisation/dtap-polio-and-hib-immunisation Accessed Date 19 January 2021